Rivo-doza Lorenzo: toetra, fiaviana ary fiovan'ny toetrandro | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 05/04/2021 10:57 | Rivodoza
El Rivo-doza Lorenzo dia natao tamin'ny volana septambra 2019 ary hita any amin'ny 45 degre avaratra andrefana. Io dia nisy fiantraikany tamin'ny morontsiraka andrefana indrindra any Eropa amin'ny làlana iray izay nifarana tamin'ny tendrony avaratry ny Nosy Britanika. Rivotra mahery nanaitra indrindra ny nahita fa izy no iray amin'ireo trangan-javatra niseho voalohany teto amin'ity faritra ity. Io no rivodoza mahery indrindra miseho any akaikin'i Espana raha mbola manana firaketana isika.
Noho io antony io dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hamintina ireo toetra mampiavaka ny Rivo-doza Lorenzo ary raha hahita azy io indray isika dia hitranga izany amin'ny ho avy.
1 Fiovan'ny toetrandro sy rivo-doza
2 Toetran'ny rivo-doza Lorenzo
3 Rivo-doza Lorenzo any amin'ny faritr'i Espana
4 Mbola hitranga indray ve izany?
Fiovan'ny toetrandro sy rivo-doza
Fantatsika fa ny voka-dratsin'ny fiovan'ny toetrandro dia ny fitomboan'ny matetika sy ny hamafin'ny trangana toetr'andro mahery toy ny haintany sy tondra-drano. Amin'ity tranga ity, izay misy fiantraikany indrindra amin'ny famoronana rivodoza dia misy ifandraisany fiakaran'ny maripana manerantany. Tsy maintsy raisina fa ny dinamika amin'ny fananganana rivo-doza dia misy ifandraisany amin'ny habetsaky ny rano etona ao amin'ny atmosfera sy ny tsy fitoviana eo amin'ny ranon'ny ranomasina samihafa. Midika izany fa any amin'ny faritra misy etona betsaka indrindra amin'ny rano dia mifarana ny orambe satria ny rano rehetra dia miafara amin'ny fisondrotana ary manjary rahona matevina.
Miaraka amin'ny fiakaran'ny maripana manerantany dia hanana fiovana amin'ny dinamika ny atmosfera isika. Ireo toerana izay nangatsiaka kokoa teo aloha, dia hafana kokoa ary, noho izany, hanana taha evaporation ambonimbony kokoa isika. Nankany Eropa ny rivo-doza Lorenzo ary, rehefa nifindra avaratra atsinanana izy dia nahazo tanjaka ho lasa rivodoza sokajy 5. Ity no sokajy avo indrindra amin'ny ambaratonga Saffir-Simpson. Nampitahaina tamin'ny rivodoza mahery Katrina izay namakivaky an'i New Orleans tamin'ny 2005..
Toetran'ny rivo-doza Lorenzo
Tsy mampitaha azy amin'ny rivodoza Katrina fotsiny amin'ny lafiny hamafiny, fa amin'ny faritra misy azy koa. Ity fisehoan-javatra manokana ity amin'ity faritra Atlantika ity no fotoana voalohany nanoratana azy. Raha ny fandrefesana andrim-panjakana sy ny manam-pahaizana rehetra dia somary nazava kokoa ny lalan'ny rivodoza Lorenzo tamin'ny kaontinanta, ary ny olana lehibe indrindra dia ny tany Azores. Tonga tany amin'iny faritra iny izy rehefa rivotry ny 160 km / ora sy ny rivotra mahery mihoatra ny 200, amin'ny lafiny sasany. Tamin'ny fotoana nahatongavany tamin'ny Nosy Britanika dia efa nalemy loatra ka tsy noraisina ho rivodoza.
Rehefa misy tafio-drivotra ateraky ny ranomasina dia mihinana amin'ny rano miakatra izy io ary mahatratra ny fara-tampony rehefa tonga any amin'ny morontsiraka. Na izany aza, rehefa tafiditra ao amin'ny kaontinanta izy, dia malemy sy very hery rehefa miditra. Izany no mahatonga ny rivo-doza matahotra kokoa any amin'ny faritra amoron-tsiraka noho ny any amin'ny faritra afovoan-tany. Arakaraka ny maha-any afovoan-tany anao no mahavonjy azy amin'ny rivodoza.
Rivo-doza Lorenzo any amin'ny faritr'i Espana
Tena tsy fahita firy ny mahita rivodoza amin'ny toerana toa antsika. Ny valiny voalohany omena an'ity karazana fisalasalana ity dia mazava be. Ny zavatra manaitra indrindra dia ny làlan-kaleha sy ny sokajy amin'ity rivo-doza ity, fa ny rivodoza kosa dia manomboka ny fiforonany any Afrika. Eto no misy ny onjan'ny fikorontanana izay miteraka tsy filaminana ary voatarika. Rehefa tonga any amin'ny ranomasina mafana indrindra any Karaiba ireo tsy fandriam-pahalemana ireo dia lasa rivodoza mahery sy matanjaka fahita matetika izy ireo.
Ny zavatra izay tsy tonga tany Karaiba intsony ity indray mitoraka ity nihaona tamin'ny rano mafana ampy namoronana ny rivodoza. Raha tokony handeha miankandrefana dia lasa niantsinanana. Araka ny efa noresahintsika teo aloha, raha tsy maintsy miforona ny rivo-doza dia tsy mila rano manara-penitra fotsiny izay mahatonga ny etona be dia be hamaritana azy, ary farany, dia omena onitra izany. Toy izao no fisehon'ny rahona mahery.
Tsy maintsy nandeha nitanjozotra 45 degre andrefana vao niforona ny Hurricane Lorenzo. Marina fa toy ny làlana tsy mahazatra amin'ny mahazatra antsika, fa mandritra izany mandeha avaratra, sokajy 5 no nalaina. Ny zavatra tena mahaliana amin'ity fisehoan-javatra ity dia nandeha tamin'ny làlambe tsy mahazatra izy ary, na dia namakivaky rano tsy dia mafana loatra aza izy io, dia nahavita nandany angovo ampy hahatratrarana ny sokajy rivodoza farany ambony.
Ireo no antony nahatongavan'ilay rivo-doza Lorenzo ho iray amin'ireo rivo-doza malaza indrindra tamin'ny androntsika. Mikasika ny fahaterahan'ilay rivo-doza dia hitantsika fa misy ifandraisany amin'ny fiovan'ny toetrandro, araka ny efa noresahintsika teo aloha. Marina fa tsy maintsy nahita rano mafana kokoa noho ny mahazatra izy vao afaka mahatratra ny sokajy 5, fa Na ahoana na ahoana, ny fisian'ity karazana rivodoza ity dia tsy afaka mifandray mivantana amin'ny fiovan'ny toetrandro. Mila fandinihana fanamarihana be dia be isika ary tranga hafa mitovy amin'izany mba hahafahana miantoka zavatra toy izany. Tokony ho raisina fa ny fiovan'ny toetrandro dia misy fiantraikany maharitra ary mbola tsy misy porofo ampy ahafahana mampifandray ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro amin'ny fananganana ny rivodoza Lorenzo.
Mbola hitranga indray ve izany?
Ny ahiahin'ny olona maro dia raha hahita rivodoza amin'ity sokajy ity any amin'ny faritra misy antsika indray izahay. Meteorology any Espana dia manazava fa amin'ny fiovan'ny toetr'andro dia mila manana fandalinana isan-karazany isika ary fisehoan-javatra mitovy amin'izany bebe kokoa raha te hahalala raha misy karazana lamina na misy fiovana amin'ny toetr'ireo rivo-doza. Ny fahalianana iray no voatonona ao amin'ireo fandinihana ary izany dia tsy maintsy jerentsika raha misy rivodoza sahala amin'izany tonga amintsika amin'ny taona ho avy mba hahafahany miresaka momba io lamina io. Ny taona talohan'ny nananantsika an'i Leslie izay nanana fitondran-tena mitovy tamin'i Lorenzo. Miaraka amin'izany ny manana fisalasalana amin'ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny lamin'ny fananganana rivo-doza.
Ny rivo-doza Leslie dia nisy fiatraikany tamin'ny firenentsika ary izy no rivodoza mahery indrindra nahatratra ny Saikinosy Iberia nanomboka tamin'ny 1842. Izy io koa dia noheverina ho iray amin'ireo rivodoza Atlantika lava indrindra tamin'ny fotoana. Izy io koa dia nanana fitondran-tena hafahafa satria nisy fiovana mitohy amin'ny làlan-kaleha. Izany dia nahatonga ny manam-pahaizana tsy afaka namolavola lalana tsara.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny rivodoza Lorenzo sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Fisehoan-javatra amin'ny toetr'andro » Rivodoza » Rivo-doza Lorenzo